iPhoto ka dhigayaa suurto gal ah in aad si ay u maareeyaan sawirrada ka dhex fayl file fara badan. Waxaad si fudud u isticmaalaysa kara sawirada maktabadaha kuu gaar ah si toos ah uga iPhoto, iyada oo aan soo fool gal kasta oo keliya ayaa arki doona sawiro, ama ugaarsi oo dhan your computer si ay u la socdaan sawirka soo xulay.
Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa waa arrin waqti lumis si ay u maareeyaan maktabadaha iPhoto aad. Taasi waa sababta Fat Cat Software horumariyo utility ah oo lagu magacaabo Manager iPhoto Library . Waxaa kaloo ku sii siinayaa awood ay uga faa'ideysan sawiro aad ka mid maktabadda gaar ah maktabadaha kala duwan, in la hubiyo in aad mar walba sii dhammaan macluumaadka muhiimka ah. Event iyo uruuriyaa ayaa sidoo kale dib u mar kasta labalaabka, oo labadaba ah albums modified oo gaarka ah ee image kasta waa la soo guuriyeen si si sax ah. Waxaad si fudud u kala qaybiyaan kartaa maktabadda culus galay maktabadaha is fara badan, milmaan maktabadaha guud ee soo socota in kasta oo kale si toos ah mid aad u wayn, ama lagu dhiso maktabad kharribeen kaas oo bilaabaya iPhoto inay soo degayn ama isku dhaceen. Waxaad samayn kartaa isticmaalka photos Library Manager ee iPhoto browser inay si degdeg ah u aragto sawiro aad wax garad ahayn in la furo laftiisa iPhoto. Waxa kale oo aad sahamin kartaa sawiro maktabadda keli ah, ama transversely dhammaan maktabadaha aad waqti isku mid ah. Halkan waa hage ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo this Manager iPhoto Library.
1. Samee maktabad cusub
2. Maktabadaha dhaqaaq
3. Raadi photos nuqul
4. Midowdo maktabadaha iPhoto
5. Tayeeyo maktabadaha kharribeen
In la abuuro maktabad cusub, waxaad u tagi kartaa "File"> "Abuur Library" ama riix "Abuur Library" button ee suuqa kala Manager iPhoto Library. Markaas daaqad arbushin doonaa in aynu aad doorato magaca iyo goobta lagu maktabad cusub. By default, maktabad cusub ee abuuray wuu madhnaan doonaa oo waxaad dooran kartaa tiirarkii in lagu daro waa in.
In la muujiyo mid maktabadaha gaar ah ama ka weyn, kuwaas oo u badan tahay waxyaabaha aad jeclaan lahayd inaad ku soo guurto buugga kala duwan, jiidi maktabadaha iyada oo rikoor maktabadda bidixda iyo kufa oo dhan oo iyaga ka mid gal goobta ku tilmaamay "Dooro Source Maktabadaha".
Ka dib markii in aad u baahan tahay in la tilmaamo dhab ahaan waxa maktabadda iPhoto aad rabto si ay u bartaan oo dhan sawirro iyo waxyaabaha kale ee aad qasayso. Waxaad awoodi kartaa in mid ka mid ah maktabadaha jiid pre-jira dhinaca meesha uu ku leeyahay "maktabadda caga dejinta", ama Haddii aad rabtid in aad jeclaan maktabadaha pre-jira si aad u ficaan galay maktabad cusub Dhuxul, riix "midowdo galay cusub ah, maktabadda bannaan "muhiimka ah. Ka dibna waxaa lagaa codsanayaa in aad doorato magac iyo meel ku wadid aad u adag tahay in la oolin ilaa maktabadda brand-cusub. Haddii aad doonayso inaad la qabsato goobta this mustaqbalka, kaliya riix "meesha Change" button inay sidaa sameeyaan.
Tababare iPhoto Library kale oo ay bixisaa awood u leeyahay inuu ka helo iyo baab'iyo sawiradiisii ​​nuqul. Waxaad sidoo kale riixi kartaa batoonka "Raadi tus ka" ee toolbar ama doortaan "Raadi tus" ka menu maktabadda. Ka dib markii in, dooran maktabadda aad doonaysid in aad ka raadin in aagga "Dooro Maktabadaha si ay u baadhaan". Hit ah "X" si meesha looga saaro maktabad ama "Ka saarida ..." button inay u boodboodaan eegaya sawiro in ay yihiin labada qashinka iPhoto ah, waxaa lagu calaamadeeyay sida qarsoon, ama aad hore uga keyword la odhan jiray "nuqul" xilsaaray inay ku iPhoto.
Markaas dooranayaan is barbar si loo go'aamiyo in sawirada ay yihiin tus. Halkan waxa ku jira laba doorasho:
Qaadanina ciyaarta: barbardhigay image si toos ah faylasha iyo tilmaamaysaa kasta kuwaas oo byte-u-byte tus ka mid ah midba midka kale.
Kulankaan filename + taariikhda: waxaa kulan sawiro ku salaysan magacooda file iyo taariikhda.
Ka dib markii u fidinno raadinta, guji buluug "Raadi tus" badhanka (waa in geeska kore ee midigta ee suuqa), iyo Maareeyaha iPhoto Library bilaabi doonaan falanqeeyo maktabadaha aad u photos nuqul.
Marka dhan photos nuqul waxaa la helay, codsigan isticmaalaa nidaamka qaanuunka ku salaysan si ay u doortaan mid dhawra. Markaas inteeda kale oo ka mid ah la geyn doonaa si qashinka, ama ay leeyihiin qaar ka mid ah tallaabo kale oo ay sameeyeen iyaga on. Waxaad dooran kartaa dhawr xeerarka nuqul dhisay-in la isticmaalayo menu pop-up ee hoos hoose ee suuqa kala. Waxa kale oo aad dooran kartaa "Edit Rules" in la dhiso xukunka kuu gaar ah si ay u doortaan kuwii ilaalinayay.
Marka lagu ridaba waxaa go'aansaday, ka dibna aad samayn karto falalka dheeraad ah si loo sawiro ee kooxda nuqul. Noocyada tallaabo laga heli karo waxaa lagu "dhaqaaji qashinka", "Flag", "Qari", "Add to Album" ama "Ka dhig Keyword". Waxaad dooran kartaa talaabo sida ay tahay baahidaada.
Tababare iPhoto Library aad u saamaxaaya in ay isu geeyo waxyaabaha maktabadaha badan oo wadajir galay hal, halka dayactirka albums, dhacdooyin, iyo metadata sawir oo dhan. Si tan loo sameeyo, ka tago si File> midowdo Maktabadaha iyo dooran dhan maktabadaha aad rabto inaad ku biirto ka column ka tagay. Ka dib markii in, riix mid ka mid ah oo aad jeclaan lahayd in aad nuqulka photos in ay ka khaanadda saxda ah. Dooro "Ha dajiyaan tus" sanduuq oo guji "Continue".
5. In la tayeeyo maktabadaha kharribeen
Inta jeer maktabadda iPhoto ah si ka burburay oo ay la socdaan seegeen photos, qiilqiil aan la garanayn iPhoto, ama isla shilalka. Iyadoo tababaraha iPhoto Library, aad u dhiska kartaa maktabad cusub oo ku tiirsan maktabadda aad hadda, hindisaha la il nafis xogta madax-bannaan musuqmaasuqa. Xataa waxaad scavenge laga yaabaa photos maktabadda in iPhoto laga yaabo in laga badiyay socdaan.
Haddii aad rabto in aad dib u dhiska maktabadda iPhoto ah, u tag "Library"> "tayeeyo Library" iyo dooran meel u maktabadda dhiso, oo haddii aad rabto in aad iPLM in scavenge photos agoon helo in xirmo maktabadda. Markaas codsiga baari doona maktabadda oo u dhiska ee ugu fiican karaankeeda ah oo aad siin Falanqeynta ka mid ah waxa ay heli kari waayey. Markaas riix "tayeeyo" badhanka si ay u abuuraan maktabad ah oo dib-u-dejinta waxa ku jira cusub ee maktabadda asalka ah mid cusub.
> Resource > Mac > Sida loo Isticmaalo Manager iPhoto Library